Azo alaina ankehitriny ny iOS 15.3.1 manitsy olana momba ny fiarovana | iPhone News
Azo alaina izao ny iOS 15.3.1, manamboatra olana momba ny fiarovana
Ny mpizara Cupertino dia namoaka fanavaozana vaovao ho an'ny iOS sy iPadOS, 15.3.1, fanavaozana kely mamely ny tsena. tapa-bolana taty aoriana ny fanombohana ny iOS sy iPadOS 15.3.
Ity fanavaozana vaovao ity dia azo alaina amin'ny ny fitaovana rehetra manavao ho iOS sy iPadOS 15: iPhone 6s sy aoriana, iPad Air 2 sy aoriana, iPad taranaka faha-5 sy aoriana, iPad Pro (modely rehetra), iPad mini 4 sy aoriana, ary iPod touch (taranaka faha-7).
Araka ny hitantsika amin'ny antsipirihan'ny fanavaozana izay navoakan'i Apple tao amin'ny tranokalany, ity fanavaozana ity dia mamaha olana amin'ny WebKit izay ahafahan'ny votoaty tranonkala manimba. mahatonga ny famonoana kaody tsy misy dikany amin'ny fitaovana amin'ny alàlan'ny fitadidiana fitaovana.
Raha mila fanazavana fanampiny momba an'io vulnerability io ianao dia ny isa nahafantarana azy dia ny 2022-22620 ary hitan'ny mpikaroka tsy fantatra anarana.
Apple dia nanambara fa, araka ny tatitra teo aloha, ity vulnerability ity nohararaotina am-pahavitrihana taloha, noho izany dia asaina manavao ny fitaovana rehetra tantanin'ny iOS sy iPadOS 15 haingana araka izay azo atao.
Ahoana ny fanavaozana ny iPhone amin'ny dikan-teny farany
Para manavao ny iPhone na iPad-ntsika amin'ny kinova farany an'ny iOS, ny fitaovanay dia tsy maintsy mihoatra ny 50% bateria (na dia tsy ilaina aza ny fanavaozana sasany).
Entina atao dia dingana rehefa mampakatra azy, satria mety hisy fiantraikany amin'ny bateria.
Rehefa mahafeno ireo fepetra / toro-hevitra ireo izahay dia miditra amin'ny sakafo Fikirana ny fitaovantsika.
Manaraka, tsindrio eo General ary avy eo miditra Fanavaozana rindrambaiko.
Raha hisintona ny kinova farany azo alaina (tokony haseho amin'ity fizarana ity) tsindrio eo Ampidino sy mametraka ary ampidiro ny kaody hidin'ny fitaovanay.
Rehefa avy nisintona sy nametraka ny fanavaozana, ny fitaovana hiverina indray ho azy io.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPhone » maro » Azo alaina izao ny iOS 15.3.1, manamboatra olana momba ny fiarovana
Hanao fanovana amin'ny Fikarohana i Apple mba hisorohana ny fampiasana tsy ara-dalàna ny AirTags azy
Ny WhatsApp dia hiaro ny fiainanay manokana amin'ny alàlan'ny fampisehoana ny fakantsary ao anatin'ny fampiharana